Firefox 88 waxay la timid horumarin loogu talagalay daawadayaasha PDF, Linux, HTTP / 3 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Firefox 88 waxay la timid horumarin loogu talagalay daawadayaasha PDF, Linux, HTTP / 3 iyo in ka badan
Maalmo ka hor ayaa la soo saaray nooca cusub ee Firefox 88 kaas oo lagu dhawaaqay kaas oo dhowr horumar ayaa la sameeyay kaliya kuma xirna biraawsarka, laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in la taageero Linux, sidoo kale hab maamuuska cusub ee HTTP / 3.
Marka lagu daro hagaajinta cilladaha iyo hal-abuurnimada, Firefox 88 waxay hagaajisay 17 nuglaansho, kuwaas oo 9 kamid ah loo calaamadeeyay inay yihiin kuwo qatar ah, 5 nuglaanta u nuglaanta waxaa sababa dhibaatooyin xagga xusuusta ah, sida daadad badan iyo helitaanka aagagga xusuusta ee horay loo sii daayay
1 Astaamaha cusub ee cusub ee Firefox 88
2 Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 88 ee Linux?
Astaamaha cusub ee cusub ee Firefox 88
Isbeddel kale oo aan ka heli karno Firefox 88 waa a xaddidaad cusub oo ku saabsan xoojinta muujinta codsiga oggolaanshaha gelitaanka makarafoonka iyo kamaradda. Codsiyadaas lama soo bandhigi doono haddii 50-kii ilbiriqsi ee ugu dambeeyay uu isticmaalehu horeyba u siiyay marin isla qalab, isla goob iyo tab isku mid ah.
Ku saabsan isbeddelada Linux, taas waan heli karnaa waxay ku dartay kaalmeynta cabbiraadda guddi taabashada oo leh jawi garaafyo ku saleysan WaylandIntaa waxaa sii dheer, markii Firefox laga bilaabay deegaanka Xfce iyo KDE, isticmaalka mashiinka ka kooban WebRender ayaa awood u leh.
Firefox 89 waxaa laga filayaa inay kujirto WebRender dhamaan isticmaaleyaasha kale ee Linux, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada Mesa iyo nidaamyada leh darawallada NVIDIA (hore, webRender waxaa kaliya loogu oggolaaday GNOME oo leh darawallada Intel iyo AMD).
Dhinaca kale, waxaa lagu muujiyey Firefox 88 Waxay ku bilaabatay ka mid noqoshada wejiyada HTTP / 3 iyo hab maamuuska QUIC. Markii hore, taageerada HTTP / 3 waxaa loo hawlgelin doonaa oo keliya boqolkiiba in yar oo adeegsadayaasha ah oo haddii aysan jirin dhibaatooyin lama filaan ah, waa loo wada heli karaa dhammaadka Maajo.
Taageerada FTP waa la joojiyay markii hore. Dejinta network.ftp.enabled ayaa loo dhigay been abuur markii hore, iyo dejinta kordhinta browserSettings.ftpProtocolEnabled ayaa lagu wadaa inay aqriso oo keliya. Dhammaan koodhka la xiriira FTP waxaa laga saari doonaa nooca soo socda.
Sababta ayaa ah yareynta halista weeraradii hore, oo leh taariikh u nuglaanta aqoonsiga iyo dhibaatooyinka dayactirka, koodh hirgelinta taageerada FTP. Waxa kale oo ay xustay ka saarista borotokoolka aan taageerin sirta, kuwaas oo aan laga ilaalinayn wax ka beddelka iyo ka-hortagga taraafikada inta lagu jiro weerarada MITM.
Qalabka horumarinta webka, gudiga kormeerka shabakada wuxuu leexiyaa inta udhaxeysa soo bandhigida jawaabaha HTTP ee qaabka JSON iyo wax isbadal ah, taas oo jawaabaha lagu faafiyo shabakada.
La Ka mid noqoshada aasaasiga ah ee taageerada qaabka muuqaalka AVIF (Qaabka muuqaalka AV1), oo adeegsanaya teknoolojiyada isku-buufinta intra-frame-ka ee qaab-dhismeedka fiidiyowga ee AV1, ayaa dib loogu dhigay sii deynta mustaqbalka. Firefox 89 waxay kaloo qorsheyneysaa inay bixiso istcimaalo isticmaale casriyeysan isla markaana kalkuleytar ku biiriso barta cinwaanka.
Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 88 ee Linux?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 88 waxay la timid horumarin loogu talagalay daawadayaasha PDF, Linux, HTTP / 3 iyo in ka badan
Salaan kadib, sifiican ayey iigu shaqeysaa aniga, waa qumman tahay, waxa aanan jeclayn waxay ahayd inay footka ka saareen laakiin sifiican hadii ay tahay horumar.
BTColor: Qoraal yar oo lagu qurxiyo GNU / Linux Terminal